Platini ma u tartamaya xilka madaxweynaha Fifa? - BBC Somali
Platini ma u tartamaya xilka madaxweynaha Fifa?
Image caption Platini
BBCda ayaa ogaatay in Platini – kaddib markii uu helay astaamo muujinaya in uu taageero ka helayo xiriirada afar qaaradood – uu isu sharixi doono codbixinta la qaban doono 26-ka bisha Febraayo ee sanada soo socota.
60-jirkan khadka dhexe kaga dheeli jiray xulka Faransiiska, ayey u badan tahay in Arbacada uu ku dhawaaqo musharaxnimadiisa.
Gudoomiyaha Xiriirka Kubadda Cagta Adduunka Sepp Blatter, oo ay da’diisu tahay 79, ayaa waxa uu madax ka ahaa Fifa tan iyo 1998.
Waxa uu xilka ka degayaa bisha Febraayo kaddib markii uu guddiga maamula ciyaaraha kubadda cagta adduunka ay soo wajaheen dhibaatooyin dhanka musuq maasuqa ah.
Platini ayaa si weyn loogu saadaalinayaa in uu badeli doono Blatter.
Iyadoo uu taageero ka haysto xiriirka Yurub ee uu hogaamiyo ayaa waxa uu fahansan yahay in uu heli doono taageerada Koonfur Ameerika, Waqooyiga, Bartamaha Ameerika iyo Caribbean-ka, iyo weliba si weyn taageerada Aasiya.
Haddaba haddii xiriir kasta oo kubadda cagta ah ee ku jira xiriirada qaaradahaa ay u codeeyaan Platini haddaba waxa uu heli doonaa 144 cod, taasi oo ah mid ka badan codadka uu u baahan yahay qofka badeli doono Blatter.